18 USC § 2257 / 2257A - Fitiavana zazalahy - Bl - Bl Manga - Bl Webtoon - Yaoi - Yaoi Manga - Yaoi Hentai
Mifanaraka amin'ny Digital Millennium Copyright Act of 1998 (US Copyright Office), ny tompona sy ny mpandraharaha an'ny
Boyslove.me dia hamaly avy hatrany ny fanambarana fanitsakitsahana ny zon'ny mpamorona notaterina tamin'ny masoivohon'ny mpiaro ny zon'ny mpamorona an'i Boyslove. Azafady mba mariho fa ambanin'ny fizarana 512 (f) an'ny DMCA (17 USC § 512 (f)), ny olona izay misolo tena ara-materialy fa misy fitaovana na hetsika manitsakitsaka dia mety ho tompon'andraikitra.
Raha mino ianao fa ny asan'ny copywriter anao dia nalaina tamin'ny fomba iray izay fanitsakitsahana ny zon'ny mpamorona, azafady mba omeo izao manaraka izao ny mpiasan'ny zon'ny mpamorona an'i Boyslove:
Fanoratana ara-batana na elektronika olona iray nomena alalana hanao andraikitra amin'ny tompon'ny zo manokana iray izay voalaza fa meloka;
Ny famantarana ny sanganasa manana zon'ny mpamorona voalaza fa voahitsakitsaka, na, raha misy fanitsakitsahana zon'ny mpamorona marobe amin'ny tranonkala iray an-tserasera voasaron'ny fampandrenesana tokana, lisitry ny asan'ireo asa ireo;
Famantarana ireo fitaovana izay voalaza fa manitsakitsaka na mety ho foto-kevitry ny fanitsakitsahana ary hesorina na fidirana izay ho kilemaina, ary fampahalalana ampy tsara ahafahan'ny Boyslove hitady ilay fitaovana (toy ny URL na laharana horonan-tsary);
Fampahalalana ampy tsara hamelana ny Boyslove hifandray aminao: anarana, adiresy, mailaka, nomeraon-telefaona, raha misy;
Fanambarana fa ny antoko nitaraina dia manana finoana matanjaka fa ny fampiasana ny fitaovana amin'ny fomba fitarainana dia tsy nahazo alalana avy amin'ny tompon'ny zon'ny mpamorona, ny masoivohony, na ny lalàna; SY
Fanambarana iray fa ny fampahalalana ao amin'ny fampandrenesana dia marina ary, amin'ny fanamelohana ny fianianana, dia omena lalana ianao hisolo tena ny tompon'ny zon'olon-tokana izay voalaza fa voahitsakitsaka.
18 USC § 2257 / 2257A Fanambarana fitandremana fitakiana fitahirizana firaketana.
Boyslove.me dia tsy mpamokatra ny atiny rehetra hita ao amin'ny tranonkala (Boyslove.me). Mikasika ireo firaketana an-tsoratra isaky ny 18 USC § 2257 ho an'ny atiny rehetra hita eto amin'ity tranonkala ity, azafady mba alefaso amin'ny tranokala namokarana ny atiny.
Boyslove.me dia tsy mpamokatra na inona na inona ary ny atiny rehetra hita ao amin'ny tranokala (Boyslove.me) izay nofaritan'ny 18 USC §2257 sy 28 CFR 75 ary noho izany dia afaka amin'ny fepetra fitahirizana rakitra.
Boyslove.me dia tranonkala fizarana sary izay ahafahana mampakatra, mizara ary mijery karazana atiny olon-dehibe isan-karazany ary raha ny Boyslove.me dia manao izay tsara indrindra vitany amin'ny fanamarinana ny fanarahana.
Boyslove.me dia manaraka ireto fomba manaraka ireto hahazoana antoka fa manaraka:
Mangataka ny mpampiasa rehetra 18 taona mba handefa sary.
Rehefa mampakatra, ny mpampiasa dia tsy maintsy manamarina ny atiny; manome toky izy fa 18 taona izy; manamarina fa mitazona firaketana ireo maodely ao anaty atiny izy ireo ary mihoatra ny 18 taona izy ireo.
Hamarino fa ny atiny ampakarina dia an'ny mpampiasa na manana alalana ara-dalàna izy ireo hampakatra, hamoaka, hizara ny atiny eo am-pelatanana.
Mino tanteraka izahay fa ny maodely rehetra, mpilalao sarimihetsika, mpilalao sarimihetsika ary olon-kafa aseho amin'ny sary mampiseho sary vetaveta mazava eto amin'ity tranonkala ity dia 18 taona no ho miakatra tamin'ny fotoana namoronana. Mino tanteraka izahay fa ny mpamokatra rehetra izay miseho ao amin'ity tranokala ity dia manaraka ny 18 USC §2257, ao amin'ny tranokalan'izy ireo.
Boyslove.me dia mampanantena ny hanao izay tsara indrindra vitany mba hahitana sy hamaranana ireo sary na / sy horonan-tsary manararaotra.
Raha mila fanampiana fanampiny dia mifandraisa [email voaaro] fanajana.